Qorshe halis ku ah shaqaalaha Dowladda Federaalka oo caawa looga shiraayo Villa Somalia - iftineducation.com
Qorshe halis ku ah shaqaalaha Dowladda Federaalka oo caawa looga shiraayo Villa Somalia
iftineducation.com – War goordhow aan ka helnay ilo lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in Madaxtooyada Somalia ay wado qorsho lagu kala diraayo inta badan shaqaalaha Dowlada.
Qorshahaani oo dajintiisu ay ka socto Villa Somalia, ayaa waxaa la sheegayaa in lagu kala dhimaayo shaqaalaha si uu u yaraado Mushaarka ay bixineyso DF.
Madaxtooyada ayaa wada dhaqan galinta qorshahaasi, inkastoo warar hoose ay tibaaxayaan in qorshahaasi ay ku kala jabeen Guddi la sheegay in Madaxweyne Xassan Sheekh uu u xil saaray maalin un ka hor inta uusan u socdaalin Mareykanka.
Qaar kamid ah guddiga kala dirista shaqaalaha ayaa ka hor imaaday qorshahaani iyaga oo diiday in la eryo shaqaale u diiwaan gishan Dowlada oo aan muddo dhowr bil ah helin xuquuqdii ay ku lahaayen Dowlada, iyaga oo taa badalkeeda ku taliyay in dib loo baaro tirada shaqaalaha DF u diiwaan gishan, islamarkaana ay soo bixi doonaan Shaqaale dhintay, kuwo Safray iyo shaqada ka tagay oo magacooda lagu qaato Mushaar kuwaasi oo looga maarmi karo shaqaala dhimista.
Shaqaale dhimistaani ayaa saameyn doonta dhammaan Wasaaradaha iyo Hay’adaha amaanka, waxaana looga gol leeyahay in Mushaarka lasiin lahaa shaqaalahaasi lagu bixiyo dhaqaalaha ku bixi lahaa Ololaha Doorashada Xassan Sheekh, waxaana xusid mudan in Kumanaan shaqaale ka tirsan DF uu dabkoodu yahay mid densan.
Shaqaalaha lagu wado in shaqada laga eryo ayaa waxa ay u badnaan doonaan kuwa aysan wadan Mas’uuliyiinta Dowlada ee iyagu aqoontooda ku helay shaqada, waxa uuna qorshuhu yahay mid lagu abaabulaayo Villa Somalia.
Talaabadaani ayaa imaaneysa xili shaqaalaha DFS aan mushaar lasiin ilaa 4-bil oo xiriir ah, iyadoo dhaqaalaha Beesha Caalamka ka imaan jiray uu yahay mid wali socda, hayeeshee ay shaqaaluhu yihiin kuwo ka ooman xuquuqdii ay lahaayen oo ay Beesha Caalamka usoo mariso DFS.